Tuesday, 04.07.2020, 02:53pm (GMT+5.5) Home Contact
अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस् - यादब देवकोटा
Thursday, 11.28.2013, 08:50am
एनेकपा माओवादी ताजा निर्वाचनको नतिजालाई आत्मसात् गरेर संविधानसभाभित्र आउला अथवा निर्वाचनमा षड्यन्त्र र धाधली भएको तातो आक्रोशलाई निरन्तरता दिँदै वैकल्पिक बाटोको खोजीमा लाग्ला भन्ने कुतुहलतापूर्ण प्रश्नले यतिखेर सिङ्गो नेपाली समाजको ध्यान खिचिरहेको छ । नेपालको समसामयिक राजनीतिलाई उथलपुथल पार्दै नयाँ शक्तिका रुपमा उदय भएको एनेकपा माओवादीलाई संविधानसभा-१को निर्वाचनले विगतमा जसरी शिखरमा चढाएको थियो संविधानसभा-२ को निर्वाचनले त्यसैगरी फेदीमा झारेको छ ।
हिंसाबाट परिवर्तन असम्भव - यादब देवकोटा
Tuesday, 11.19.2013, 03:04pm
हिंसा जहिल्यै वर्जित हुन्छ । हिंसाले सिर्जनात्मकता दिन सक्दैन । हिंसा गर्नेहरूले जतिसुकै उपलब्धि प्राप्तिका लागि भने पनि हिंसा हिंसा नै हो । घोषित रुपमा हिंसा मच्चाउनेको मात्र हैन शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा उत्रनेहरू पनि हिंसामा उद्यत हुने गरेका छन् । विशेषतः निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा मच्चिएका हिंसाका घटनाले आम मतदातामा भय सिर्जना गरेको छ ।
एनआरएनको क्षमता र अपेक्षा - यादब देवकोटा
Wednesday, 10.30.2013, 01:59pm
विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन गैरआवासीय नेपाली संघको छैठौं विश्व सम्मेलन केही दिन पहिले सकिएको छ । सम्मेलनले अष्ट्रेलियाका धनाढ्यमध्येका एक शेष घलेको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । सम्मेलन अघि नै एनआरएनको नेतृत्व गर्न चाहनेहरु कसरी सम्मान पाउने र कसरी आफूलाई स्थापित गराउने भन्ने ध्याउन्नमा देखिएका बेला मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलको आशीर्वाद लिएर निर्वाचनमा होमिएका एनआरएनभित्र पनि चर्को राजनीति देखियो ।
संविधान बनाउनै केन्द्रित होला संविधानसभा–२
Tuesday, 10.08.2013, 11:15am
मुलुकमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ । राजनीतिक दलहरूले प्रयत्क्ष तथा समानुपातिकको उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईकार्य समेत सुरु गरिसकेको छ । दलका नेताहरू गाउँगाउँमा पुग्न थालेका छन् । उम्मेदवारहरूको चर्चा घरघरमा हुन थालेको छ ।
विदेशी ल्याएर निर्वाचन विथोल्ने हो ? -यादब देवकोटा
Wednesday, 10.02.2013, 01:26pm
संविधानसभा निर्वाचनले मुलुक सिक्किमीकरण, फिजीकरणको दिशामा जान्छ भन्दै यसको विपक्षमा उभिएको नेकपा–माओवादीले निर्वाचन विरोधी अभियानमा विदेशीलाई प्रयोग गरेको विषयले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय झन पेचिलो बन्न पुगेको छ । विदेशीको इशारामा निर्वाचन हुन लागेको भन्ने दलले निर्वाचन विथोल्न विदेशीलाई प्रयोग गर्नु कति जायज हो भन्ने विषय पनि यतिबेला उठिरहेको छ ।
राजनीतिक सहिष्णुताको चरम अभाव
Wednesday, 09.04.2013, 12:38pm
राजनीतिमा बढ्दो असहिष्णुता र अपमान गर्ने संस्कृतिको विकारले मुलुकले स्पष्ट गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक स्वार्थका लागि लाशमाथि पनि राजनीति गर्न पछिपर्दैनन् भन्ने पनि नेपालका नेताहरूले देखाइसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको निधनपछि देखियो । बाँचुन्जेल वहिष्कार गर्नेहरूले मरेपछि गुणगान गाउने नेपालको पुरानै चलन हो ।
फूलमाथि राजनीतिका साँढेहरू - सइन्द्र राई
Wednesday, 08.28.2013, 02:30pm
संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि अशोक राईमा जातीय नारा तीब्र गतिमा अङ्कुरायो । पार्टी फुटाउनेसम्मको बजार चर्चाले एमाले कार्यकर्तालाई निद्रा परेन । कोही गुडेर कोही उडेर बल्खु आए । बुताले भ्याएसम्म अनुनय विनय गरे । न दङ्ग्याउनेले सुने न सुन्नेले सुने । भान्छा बाराबारको खेलमा अन्ततः अशोक राईले घर छोड्ने नै निष्कर्ष निकाले ।
बढ्दो सामाजिक अपराध र विकृत मानसिकता
Wednesday, 08.21.2013, 01:45pm
मुलुकमा कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नसकिने स्थिति छैन । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, विकास सबै पक्ष यतिबेला ध्वस्त प्रायःको अवस्थामा छ । यी सबै नीतिहरूलाई संचालन गर्ने राजनीति नै ठीक ठाउँमा नरहेका कारण समाजका अन्य पक्षहरूमा पनि यसको दुष्प्रभाव परेको हो । यसका अतिरिक्त अपराधलाई राजनीतिले संरक्षण गर्दा आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरू अरु उत्साहित हुन पुगेका छन् । यो नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सबभन्दा ठूलो अवरोध हो ।
Wednesday, 08.14.2013, 12:26pm
मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई संचालन गर्ने नीतिहरुको पनि नीति राजनीति नै दिग्भ्रमित र गलत बाटोतिर लाग्यो भने त्यस देशका जनताले पाउनुसम्म दुःख पाउँछन् । राजनीतिले सही दिशा लिन नसक्दा र राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग हुँदा यसका खेलाडीहरुमा मानवीय सम्वेदनशील पक्ष समेत हराउँदै जाने गरेको स्पष्ट चित्र हाम्रा सामु छन् ।
लेण्डुप दोर्जे बन्ने कि मदन भण्डारी र भीमदत्त !
Tuesday, 08.06.2013, 08:02am
काठमाडौं । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता चरम संकटमा परेको आम चिन्ताको विषय भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई सर्वेसर्वा बनाउनेहरुले यसतिर पटक्कै चासो दिएका छैनन् । उल्टै राष्ट्रवादी सोच राख्नेहरुको दोहोलो काढ्ने गरिएको छ । राष्ट्रियताको पक्षमा अडान राख्ने भीमसेन थापा, जनताको अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने भीमदत्त पन्त नेपाली माटोका सपुत हुन् । यी दुईलाई अनेक षड्यन्त्र गरेर हत्या गरियो । राष्ट्रियता तथा जनअधिकारका सवालमा यी दुई नाम गौरवका साथ लिइन्छ । त्यस्तै राष्ट्रघातीका रुपमा सिक्किमका तत्कालीन काजी लेण्डुप दोर्जेलाई लिइन्छ ।
वीपी–पुष्पलाल र राष्ट्रिय मेलमिलाप
Tuesday, 07.30.2013, 03:40pm
नेपाली क्रान्तिका दुई पात्रहरूको स्मृति दिवस अघिल्लो हप्ता मनाइयो । प्रजातन्त्र र समाजवादबाट मुलुकको रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने वीपी कोइराला र साम्यवाद नै मुलुकको आवश्यकता हो भन्दै क्रान्तिमा होमिएका पुष्पलाल दुई विपरीत राजनीतिक सिद्धान्तका अनुयायी भए पनि यी दुबैको उद्देश्य मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, जनअधिकार र आर्थिक–सामाजिक विकासका साथ राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम अखण्डता मजबुत बनाउने थियो, मेलमिलापको माध्यमबाट राष्ट्र बचाउने थियो ।
राजनेता बन्ने कि राष्ट्रिय आवारा ? - दयालबहादुर शाही
Wednesday, 07.24.2013, 12:44pm
नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अन्तिम र सवोच्च शक्ति नेपाली जनता नै हुन् । खेतमा किसानको मेहनतले मात्र धान फल्छ, नत्र घाँसपातको साम्राज्य फैलने गर्दछ । सानो मुलुकमा जनताको जागरुकता र एकताले मात्र जनताको राजनीति विजयी हुन्छ, नत्र बाह्य हस्तक्षेप र प्रतिगमन बलशाली भैदिन्छ ।
अब पशुपतिनाथले मात्र मुलुक बचाउने !
Wednesday, 07.17.2013, 11:40am
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको अहिलेको दृश्यले यो मुलुक कसरी चलिरहेको छ र कसरी टिकिरहेको छ भन्ने कुतुहलता जागृत छ । आम मानिसमा यतिबेला मुलुक पशुपतिनाथ र रेमिट्यान्सले मात्र धानिरहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
अपेक्षित वातावरणको अभाव
Tuesday, 07.09.2013, 08:45am
संविधानसभाको निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्छ भन्ने अपेक्षित वातावरण तयार हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको चरम उदासिनताले गर्दा मुलुकमा निर्वाचनको सहज वातावरण समेत बन्न सकेको छैन । निर्वाचन जसरी पनि गराउने र निर्वाचन हुनै नदिने पक्षबीच सम्भावित द्वन्द्वको त्रासले सिंगो मुलुक अहिलेदेखि नै त्रसित बन्न पुगेको छ ।
Friday, 07.05.2013, 07:31pm
आशंका निवारणमा देखिएका चुनौति
Wednesday, 06.26.2013, 12:27pm
राजनीतिक दलहरूबीचको आशंका, आक्रोश, पूर्वाग्रह, आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चिर्दै सरकारले आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको घोषणासंगै जनतामा निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको भए पनि राजनीतिक परिस्थितिले आशंकालाई नै बल पुर्याउने काम गरिरहेको छ । प्रमुख भनिने चार राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफल बनाउन जसरी अग्रसरता देखाउनु पर्ने थियो त्यो पटक्कै छैन ।
यत्रोविधि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको कारण के हो ?
Tuesday, 06.18.2013, 02:49pm
एसएलसीको नतिजालाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण दर घटिरहेको छ । दुई वर्षयता करिब आठ प्रतिशतभन्दा बढीले उत्तीर्ण दर घटिरहेको छ । यतिधेरै संख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु शैक्षिक पद्धति र परीक्षा प्रणालीको मात्र दोष हो कि यसका कारक अरु पनि छन् भन्ने अहिले गम्भीर बहसको विषय बनिरहेको छ ।
Wednesday, 06.12.2013, 12:18pm
असहाय, दीन–दुःखीलाई सेवा गर्नु परम धर्म हो भन्ने नेपाली परम्परा विस्तारै हराउँदै गएको छ । असशक्त, रोगी, शारीरिक कमजोरी भएका, वृद्ध–वृद्धा र महिलाहरूलाई सहयोग गर्ने परम्परा पनि अब हराउँदै गएको छ । वृद्धवृद्धाको सेवाको नाममा पशुपति वृद्धाश्रममा गएर वर्षको एकदिन मिठाई, कपडा र कम्बल बाँड्ने काम हुने गरेको छ । उता दैनिक जीवनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा समेत बलिया बांगाले नै हडप्ने गरेका छन् ।
Wednesday, 06.05.2013, 02:55pm
यतिबेला मुलुकको शिर निहुरिएको छ केही राजनीतिक दलका स्वार्थी नेताहरूका कारण । इतिहासमै नेपाल यति कमजोर, विदेशीको चलखेल र समस्यै सस्याको चंगुलमा फसेको थिएन । यसको कारण नेपाल भूमि पनि होइन र नेपाली जनता पनि होइनन् ।
Tuesday, 05.28.2013, 08:12am
» जनताले सम्झिरहने मदन भण्डारी
» बन्द फिर्ता : जनतालाई दुःख नदिने निर्णय !
» दिल्लीमा प्रचण्डको प्रशंसै प्रशंसा !
» प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र र गणतन्त्र
» सहमतिको प्रयास नहुनु अशुभ संकेत
» कांग्रेसको त्रिवेणी भेलाको निहितार्थ
» राष्ट्रिय आकांक्षा ओझेलमा
» समयमै सचेत हुनु बुद्धिमानी
» किन हुन्छन् विवादास्पद निर्णय ?
» नेताहरू मुलुक असफल बनाउन सफल
» समतामूलक सामाजिक संरचनाको आवश्यकता
» विकृतिको जड नै शक्तिशाली
» प्रजातन्त्र दिवस : सन्दर्भभित्रका कुरा
» एकीकरण ताकाको राज्य सहकारी खडा गरौं - खगेन्द्रराज सिटौला
» सिद्धान्तविहीन परनिर्देशित राजनीतिको परिणाम
» सिद्धान्तहीन गठबन्धनका विकृत उपजहरू
» गुम्दो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा
» महिला हिंसा : विकृत मानसिकताको उपज
» समानताको नाराभित्र कैद महिला अधिकार
» अभिषाप बनेको एउटा कलंकित प्रथा